Ny Bahamas, ny fitempon'ny fon'ny fizahan-tany dia mankalaza ny andro manerantany fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Ny Bahamas, ny fitempon'ny fon'ny fizahan-tany dia mankalaza ny andro manerantany fizahan-tany
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Fandefasana gazety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Ny praiminisitra lefitra, ny manan-kaja I. Chester Cooper, ny minisitry ny fizahantany, ny fampiasam-bola ary ny fiaramanidina.
Ny minisitry ny fizahantany, fampiasam-bola sy fiaramanidina Bahamas, ny praiminisitra lefitra, The Honorable I. Chester Cooper dia manamarika ny Andro faha-41 taonan'ny fizahan-tany manerantany,
Ny Nosy Bahamas dia manatevin-daharana ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany sy ny Fikambanana fizahan-tany any Karaiba amin'ny fanekena ny fiantraikan'ny fizahan-tany ara-tsosialy sy ara-toekarena goavana amin'ny olona tsy tambo isaina manerantany.
"Tamin'ity taona ity, ny Andro eran-tany ho an'ny fizahantany dia voatondro ho andro iray hifantohana amin'ny fitomboana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany, izay tena mampientanentana," hoy ny praiminisitra lefitra The Honorable I. Chester Cooper, minisitry ny fizahan-tany, ny fampiasam-bola ary ny fiaramanidina Bahamas.
“Tahaka ny toerana maro any Karaiba, ny fizahan-tany dia fitempon'ny fon'ny Bahamas ary hoy ny filazanay dia raharahan'ny tsirairay izany.
Mahavariana ny torapasika eto amintsika, ary madio ny rano azonao jerena eny amin'ny habakabaka, saingy tsy izany no mamaritra antsika.
Fa kosa, ny olona tsirairay izay mamolavola ny traikefa Bahamas ary mijoro mandray soa avy amin'ny fahombiazan'ny fizahan-tany. Manolo-tena amin'ny famoronana asa sy fotoana mety ho an'ny Bahamians rehetra aho ary hanampiana ny firenentsika lehibe hanasitrana. ”
Rehefa manomboka mihamora ny famerana ny dia iraisam-pirenena, atosiky ny fitomboan'ny fahazoana vaksiny, dia mipetraka tsara i Bahamas mba hanohizana ny fanarenana. Ny fiakaran'ny fiaramanidina voatondro miaraka amin'ny fiverenan'ny indostrian'ny fitsangantsanganana dia miteraka fiakarana tsara amin'ny isan'ny mpitsidika, izay mitarika mpitsidika efa ho 500,000 ao anatin'ny enim-bolana voalohany amin'ny taona.
"Na dia niatrika ady mafy aza isika nandritra ireny fotoana tsy mbola nisy toy izany dia tsy maintsy mifantoka sy manantena foana isika rehefa manomboka hisokatra izao tontolo izao," hoy ny fanamarihan'ny praiminisitra lefitra.
“Miara-miasa amin'ireo mpitarika manerana an'i Karaiba aho mba hanasongadinana ny maha-zava-dehibe ny fampidirana ao anaty sosialy, ny faharetana ary ny toerana kendrena ary orinasa. Ny firenentsika tsara tarehy, sy ny faritra Karaiba malalantsika, dia hambinina indray ary hanohy handroso, toy ny amin'ny teny filamatr'i The Bahamas: Mandrosoa, miakatra, mandroso, miaraka. ”
Jereo ny nosy rehetra atolotra ao www.bahamas.com